ပထမဆုံးရငျသှေးလေးကွောငျ့ ခဉျြ ခွငျးတကျတဲ့ကိစ်စကို ဇနီးမောငျနှံနှဈ ယောကျ ဂြူတီခှဲထားတယျလို့ အရှ နျး ဖောကျပွောလာတဲ့ ခငျလှမျး – XB Media Myanmar
ပထမဆုံးရငျသှေးလေးကွောငျ့ ခဉျြခွငျးတကျတဲ့ကိစ်စကို ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျ ဂြူတီခှဲထား တယျ လို့ အရှနျးဖောကျပွောလာတဲ့ ခငျလှမျး
သရုပျဆောငျ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ နှဈဖကျမိဘ သဘောတူကွညျဖွူစှာနဲ့ ခဈြသူတှေ အ ဖွဈ ရှလေကျတှဲခဲ့ကွပွီး မမြှျောလငျ့ပဲ ကိုယျဝနျရသှားခြိနျမှာတော့ အစီအစဉျမရှိပဲ လကျထပျ ခဲ့ကွတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ ရုတျတရကျ လကျထပျခဲ့ကွပမေယျ့ သူတို့ နှဈယောကျရဲ့ ကွငျစဦးအိမျထောငျသညျဘဝလေးကို အေးခမျြးစှာနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးနပွေီး ရငျသှေး လေးအတှကျ ဂရုတစိုကျစောငျ့ရှောကျပေးနကွေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးအတှကျ စိတျလှုပျရှားရငျခုနျနကွေတဲ့ စညျဖွိုးနဲ့ ခငျလှမျးတို့ကတော့ ဗိုကျထဲက သန်ဓသေားလေးကွောငျ့ ခဉျြခွငျးတကျတဲ့ကိစ်စကို ဇနီးမောငျနှံနှဈယောကျ ဂြူတီ ခှဲ ထားတဲ့အကွောငျးကို “ကိုယျက ခုဆို မနကျ၃နာရီခှဲ တဈခါ မနကျ ၇နာရီတဈခါ အစာ ထထ စား နရေတယျ။ အတှအေ့ကွုံရှိတဲ့လူတပွေောတာတော့ အဲတာ ကလေးအကငျြ့တဲ့။ ဆိုတော့ နှဈ ယောကျသား ခုထဲက Duty ခှဲကွတယျ။ သူက မနကျ ၇နာရီတာဝနျယူမယျတဲ့။ ဂြူးက မနကျ၃ခှဲ တာဝနျယူတဲ့ 🥴. ဟုတျပါပွီ ဖဖေစေညျရယျ 😁 ရဈမှခေံသားကွီးရဲ့အခဈြခံခဈြဇနီး ❤️” ဆိုပွီး ခငျလှမျးက သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ ပွောလာပါတယျ။
စညျဖွိုးကတော့ ရငျသှေးလေးကို အမှနျတကယျ လှယျဆောငျထားရတဲ့ ခငျလှမျးထကျ ပိုပွီး တော့ တောငျ သညျးသညျးလှုပျသူဖွဈပွီး သားဦးလေးအတှကျလညျး သူ့ကိုယျသူ ဂရုစိုကျလှနျး သူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ခငျလှမျးနဲ့ စညျဖွိုးတို့အဖွဈကိုကွညျ့ပွီး သ ဘော ကနြကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအား လုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလို ကျ ပါတယျ။
ပထမဆုံးရင်သွေးလေးကြောင့် ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ကိစ္စကို ဇနီးမောင်နှံနှ စ်ေ ယာက် ဂျူတီခွဲထား တယ် လို့ အရွှန်းဖောက်ပြောလာတဲ့ ခင်လွှမ်း
သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူကြည်ြ ဖူ စွာနဲ့ ချစ်သူတွေ အ ဖြစ် ရွှေလက်တွဲခဲ့ကြပြီး မမျှော်လင့်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားချိန်မှာတော့ အစီအစဉ်မရှိပဲ လက်ထပ် ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှမ်းတို့ကတော့ ရု တ်တရက် လက်ထပ်ခဲ့ကြပေမယ့် သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကြင်စဦးအိမ်ထောင်သည်ဘဝေ လး ကို အေးချမ်းစွာနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းနေပြီး ရင်သွေး လေးအတွက် ဂရုတစိုက်ေ စာင့်ရှောက်ပေးနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ရင်သွေးလေးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေကြတဲ့ စည်ဖြိုးနဲ့ ခင်လွှ မ်း တို့ကတော့ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားလေးကြောင့် ချဉ်ခြင်းတက်တဲ့ကိစ္စကို ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် ဂျူတီ ခွဲ ထားတဲ့အကြောင်းကို “ကိုယ်က ခုဆို မနက်၃ နာရီခွဲ တစ်ခါ မနက် ၇နာရီတစ်ခါ အစာ ထထ စား နေရတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူေ တပြောတာတော့ အဲတာ ကလေးအကျင့်တဲ့။ ဆိုတော့ နှစ် ယောက်သား ခုထဲက Duty ခွဲကြတယ်။ သူက မနက် ၇နာရီတာဝန်ယူမယ်တဲ့။ ဂျူးက မနက်၃ခွဲ တာဝန်ယူတဲ့ 🥴. ဟုတ်ပါ ပြီ ဖေဖေစည်ရယ် 😁 ရစ်မွေခံသားကြီးရဲ့အချစ်ခံချစ်ဇနီး ❤️” ဆိုပြီး ခင်လွှမ်းက သူ မရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ပြောလာပါတယ်။
စည်ဖြိုးကတော့ ရင်သွေးလေးကို အမှန်တကယ် လွယ်ဆောင်ထားရတဲ့ ခင်လွှမ်းထက် ပိုပြီး တော့ တောင် သည်းသည်းလှုပ်သူဖြစ်ပြီး သားဦးလေးအတွက်လည်း သူ့ ကိုယ်သူ ဂရုစိုက်လွန်း သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခင်လွှမ်း နဲ့ စည်ဖြိုးတို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး သ ဘော ကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖ တ် ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအား လုံးလည်း သာယာေ ပျာ်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလို က် ပါတယ်။